Isku Hayn Dal iyo Dad Mise Kala Hayn Dal iyo Dad…W/Q:-Nouman M Muse |
Isku Hayn Dal iyo Dad Mise Kala Hayn Dal iyo Dad…W/Q:-Nouman M Muse
Shirweynaha Xisbiga waddani ee ka dhacey gobalka Togdheer waxaan lee nahey bahweynta waddani hambalyo hambalyo.
Marlabaad isku heynta dal iyo dad waxa uu ku dhamaadeey sawirka xaga sare idinka muuqda, kudka guur oo qanjo uguur weeyi xaalku, waxa aan kulmiye ku diidanaa ayuu Waddanina la shiryimid, waa isma dhaanto & dhasheed.
Waxaan sidaas u leeyahay Xisbiga kulmiye ayaa lagu xama jiray jeegaan iyo qabaa’il isku bahaystay balse waxaa muuqata inuu hadda xisbiga waddanina qaaday jidkaasi qodaxda badan oo ay bulshada somaliland hore uga gun gaadhay heerka lagu gaadhi karo.
Waxaan aan dhageystey badi masuuliyinta xisbiga waddani hadalada ay halkaas ka soo jeediyeen, waxa aan ka qaatey (isku heynta dalka iyo dadka) hadalada Gudoomiyaha xisbiga waddani waxey ubadnayeen kaftan iyo hadalo inta badan bulshada social media isku weydaarsato, sida jabhado, kalidii taliye & inkale oo badan waxaana cadeyn u ah inuu kaftamayey khudbadiisa dhoolacadeyn iyo qosal badan ayaa ku jirey oo aad moodoo in la joogo xaflad xaflad.
Waxa kale oo iga soo baxdey Gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro inuuna lasocdba isaga iyo xubnaha kale ku dhawdhaw xaalada caafimaadka bulshada reer somaliland ku sugan tahey, & shaqaalaha caafimaadka somaliland waayo khudbadiisa meelna kaga ma xusin inta aan arkayey ma jirto.
Gudoomiyaha xisbiga waddani waxa uu ubaahan yahey shaqsi caafimaadka somaliland si fiican u fahansan iyo mashaaric kala duwan ee ka socda, somaliland.